20-Kii Kalidii-Taliye Ee Ugu Awood Badnaa Qaaradda Afrika – Maanta Iyo Jose Eduardo & Paul Biya —Q:5aad – Tusmoonline.com
20-Kii Kalidii-Taliye Ee Ugu Awood Badnaa Qaaradda Afrika – Maanta Iyo Jose Eduardo & Paul Biya —Q:5aad
Arrimaha Bulshada Dhacdooyinka Wararka	December 19, 2016	144	Like
Jose Eduardo Dos Santos – Angola (1979- Illaa Imika)
Madaxweynaha waddanka Angola Jose Eduardo Dos Santos waxa uu kaalinta 9aad kaga jiraa liiska kala sarraynta digtaatoorrada qaaradda Afrika mudada dheer ku amar ku taaglaynayay waxaana lagu tilmaamaa madaxweynaha illaa maanta ugu wakhtiga dheer qaaradda Afrika mudada uu xilka hayay marka laga hadlayo oo dhan in ka badan 36 sanadood. Jose Eduardo Dos Santos waxa u xukunka dalka Angola gacanta ku dhigay sannadkii 1979 waxaanu sidaa ku noqonayaa Madaxweynihii ugu taariikhda dheeraa ee soo mara xukunka madaxtinimo ee qaaradda Afrika illaa maantana xilkaasi haya. Kaliya waxa ay isku xukun yihiin Madaxweynaha wadanka Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo kaasi oo isna isla sannadkaasi 1979-kii qabsaday xukunka wadankiisa.
Muddo xileedka: 36 sanadood+
Madaxweynaha wadanka Angola Jose Eduardo Dos Santos waxa lagu tilmaamaa nin aan ogolayn in xukunka dalkiisa lala wadaago inta uu nool yahay taasina keenayso in uu mudada intee le’eg xukunka isaga amar ku taagleeyo. Dhinaca dhaqaalaha kor ayuu u qaaday dalka Angola waxaanu ka dhigay waddanka saddexaad ee ugu dhaqaale badan dalalka saxaraha ka hooseeya waxaana kaliya ka horreeya Nigeria iyo South Africa balse dhaqaalahaasi waxa uu intiisa badan ku dhacaa gacanta madaxda ninkani ugu sarreeyo iyo qoyskiisa waxaanay dakhli ahaan dadka reer Angola maalintii ku nool yihiin wax ka yar $2 calaa qof.
Shidaalka iyo hantida uu dalkani qaniga ku yahay waxa ku hodmay qoyska Madaxweyne Jose Eduardo Dos Santos iyo inta ka ag dhaw.
Xukunkiisa: Xukunka Madaxweynahan wakhtiga dheer dalkaasi Angola xukumayay waxa lagu tilmaamaa mid aad u adag. Musuqmaasuq aad u ballaadhan oo dalkaasi ragaadiyey. Awoodaha dawladnimo oo si xun loo aadeegsado, ku tumashada xuquuqda aadamaha iyo dadka siyaasadda u dhaqdhaqaaqa oo gacta hoostiisa la galiyo.
Paul Biya – Cameroon (1982-Illaa Imika)
Paul Biya oo xukunka dalka Cameroon sida uu doono ugu amar ku taagleeyaa waxa uu ka mid yahay kalidood taliyayaasha qaaradda Afrika soo xukumay kuwooda ugu wakhtiga dheer. Waxa uu wadanka Cameroon xukumayaa illaa imika muddo dhan 33 sanadood. Ma jirto cid la tartantaa mana qabto doorashooyin lagula tartami karo waxaanu xukunka dalkiisa ku hayaa gacan adag oo milatari. Paul Biya waxa uu xukunka dalkiisa qabsaday sannadkii 1982-kii isaga oo wakhtigaasi xukunka ku qabsadya hab jujuub ah oo aan doorasho ku iman. Balse dalka Cameroon 30-kii sano ee ugu dambeeyey waxa uu ahaa waddan degan oo qalalaase siyaasadeed aanu ka taagnayn isaga oo xidhiidho badan oo adag la samaystay dalal badan oo adduunka ah.
Muddo xileedka: 33 sanadood+
Paul Biya mudadii dheerayd ee uu dalkiisa Cameroon xukumayay waxa uu sameeyaa wax kasta oo uu awooddiisa ku sii dheeraysan karo mana aha nin u diyaar ah in uu sinaba uga tago xukunka ilaa geeri mooyiye waxaanay shacabkiisa in badan oo ka mid ahi ku garaadsadeen isaga oo xukunka haya sida ay dhallinyaro badan oo Afrikaan ahi dalalkooda illaa maanta oo ay rag waaweyn noqdeen ay u taagan yihiin raggii xukunka hayay maalintii ay dhasheen oo wali hor taagan waana nasiib darrooyinka qaaradda Afrika u gaarka ah. Xukunka ninkani waa kali-talisnimo aan xad lahayn. Waxaanu dalkiisa ka gaystaa gabood fallo badan iyo musuqmaasuq ragaadiyey xukuumadiisa ehelkiisuna waxa ay ku Milan yihiin awoodda iyo dhaqaalaha dalka.